Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Baarlamaanka Maraykanka oo looga hadlay xaalada Qasan ee Itoobiya.
Daawo: Baarlamaanka Maraykanka oo looga hadlay xaalada Qasan ee Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ November 2, 2017
In kabadan 70 mudane oo katirsan golaha Congress-ka Maraykanka ayaa sheegay in lagaadhay xiligii wax laga qaban lahaa gabood falada iyo dhaqan xumida xukuumada aan xuquuqul insaanka eegin ee wayaanaha.
Sida aan horay idiinku sheegnayba qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Maraykanka ayaa soosaaray qaraar uu tirsigiisu yahay HR 128 kaas oo ladoonayo in cunaqabatayn lagu saaro xukuumada dadkeedii xasuuqday ee wayaanaha.
Make Coffman oo kamid ah Congressman nada Maraykanka ayaa sheegay in ay dowlada Maraykanka kucadaadinayaan sidii cunaqabatayn loosaari lahaa xukuumada fashilantay ee wayaanaha, wuxuuna Make Coffman sheegay in ay qaraarkan guul kagaadhi doonaan.
Make Coffman ayaa sidoo kale sheegay in inta ay goori goor tahay loobahan yahay qorshe cad oo wax lagaga qabanayo tacadiyada kajira wadanka Itoobiya iyo laxisaabtanka xukuumada cadaalad darada kudhisan ee wayaanaha.
Siyaasiyiin iyo madax kala duwan oo dowlada Maraykanka kasocda ayaa tagay wadanka Itoobiya si ay usoo baadhaan dhibaatooyinka kala duwan ee lasheegayo waxayna dhamaan siyaasiyiintu soo arkeen xaalada muruqsan ee wadanka iyo gabood falada loogaysto dadka shacabka ah ee xaqooda dibad baxyada nabadeed kuraadsanaya.
Dowlada Maraykanka ayaa kamid ah dowladaha caydha siiya wadanka Itoobiya waxaana jira cadaadis gudaha iyo dibadaba kaga imaanaya oo dowlada Maraykanka oo ladoonayo in lagu cunaqabateeyo wadanka ay cadaalad daradu caadiga kanoqotay ee Itoobiya.